एचएमओ बनाम पीपीओ: के पीपीओ एचएमओ भन्दा राम्रो छ? के यो लायक छ? - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी खेलहरु प्रेस
मुख्य >> कम्पनी >> एचएमओ बनाम पीपीओ: स्वास्थ्य सेवा योजनामा ​​भिन्नता थाहा पाएर
एचएमओ बनाम पीपीओ: स्वास्थ्य सेवा योजनामा ​​भिन्नता थाहा पाएर
तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि सही स्वास्थ्य बीमा योजना छनौट गर्नु गाह्रो काम हो। स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो लागतको साथ, यो सस्तो योजना र सर्वोत्तम सम्भव हेरचाह प्रदान गर्ने योजना फेला पार्न सन्तुलन गर्न गाह्रो हुन सक्छ। निर्णय गर्नको लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक योजनाले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्दछ। यस लेखमा, हामी दुई लोकप्रिय प्रकारका योजनाहरू तुलना गर्दछौं - HMO vs. PPO — र प्रत्येकको सुविधाहरूमा हेर्नुहोस्।
एकHMO, जो स्वास्थ्य रखरखाव संगठन को लागी छोटो छ, स्वास्थ्य योजना को एक प्रकार हो कि सामान्यतया प्राथमिक बिरामी चिकित्सकहरु (PCPs) ले बिरामीको हेरचाह समन्वय गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू डाक्टर, अस्पताल, र अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्क प्रयोग गर्छन्। जब तपाईं एक HMO योजना छनौट गर्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूको नेटवर्कबाट पीसीपी छान्नुहुन्छ। तपाईंको पीसीपी सामान्यतया तपाईंको आवश्यक चिकित्सा सेवाहरू समन्वय गर्दछ, परीक्षणहरू र नेटवर्क विशेषज्ञहरूका लागि सिफारिशहरू प्रदान गर्दछ, र सामान्यतया रिपोर्टहरू र परीक्षण परिणामहरू प्राप्त गर्दछ। तिनीहरू सामान्यतया नेटवर्कको देखभालमा कभर गर्दैनन्, आपतकालमा बाहेक।
पीपीओ भनेको के हो?
एक पीपीओ, जो प्रेफरड प्रदायक संगठनको लागि खडा हुन्छ, स्वास्थ्य योजनाको एक प्रकार हो जसमा डाक्टरहरू, अस्पताल, र अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्क पनि हुन्छ; यद्यपि हेरचाहको खोजी गर्दा उनीहरूले अधिक लचिलोपन प्रदान गर्दछ तिनीहरूले नेटवर्क बाहिरका स्वास्थ्य सेवा सेवाहरूको देखभालको लागि भुक्तान गर्छन्, तर तिनीहरू प्राय: कम दरमा त्यसो गर्छन् र बीमा गरिएको व्यक्ति कुल लागतको एक अंशको लागि जिम्मेवार हुन सक्छ। तपाईलाई विशेषज्ञलाई भेट्न प्राय: जसो रेफरलको आवश्यकता पर्दैन।
एचएमओ बनाम पीपीओ: के फरक छ?
HMOs र PPOs सँग सम्बन्धित in-नेटवर्क र नेटवर्क बाहिर नेटवर्क फरक बाहेक, त्यहाँ व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरु संग सम्बन्धित बिभिन्न सुविधाहरु छन्। निम्नलिखितले केही सुविधाहरू तुलना गर्दछ।
पीपीओसँग प्रदायकहरूको ठूलो नेटवर्क हुन्छ
दुबै एचएमओ र पीपीओसँग डाक्टरहरू, अस्पतालहरू र अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्क छ। तपाईंको नेटवर्कको मेडिकल प्रदायकहरू प्रयोग गर्दा तपाईंको आउटब्याटको खर्च कम हुन्छ।
HMOs सामान्यतया तपाइँलाई नेटवर्क निर्देशिकाबाट एक प्राथमिक हेरचाह प्रदायक छनौट गर्न आवश्यक छ। यो प्राय योजनाको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि हो - कि तपाइँ प्राय जसो प्रदायकहरूको संख्यामा सीमित हुनुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईले सामान्यतया विशेषज्ञहरू देख्नु अघि PCP हेर्न आवश्यक पर्दछ। रेफरल आवश्यकताहरूको लागि एक सामान्य अपवाद gynecologic / प्रसूति हेरचाह हो। तपाईंलाई यी डाक्टरहरू हेर्न रेफरलको आवश्यक पर्दैन, तर उनीहरू अझै तपाईंको प्रदायक नेटवर्कमा हुनु आवश्यक छ।
पीपीओ योजनाहरु को प्रदायकहरु को नेटवर्क मा कम प्रतिबन्धहरु छन्। तपाईंसँग अधिक लचकता छ, र पीपीओ नेटवर्कहरू सामान्यतया HMOs भन्दा ठूला हुन्छन्। धेरैलाई तपाईले प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक छनौट गर्न आवश्यक पर्दैन जब तपाई योजनाको लागि साइन अप गर्नुहुन्छ, र तिनीहरूले केहि भुक्तानी गर्छन् नेटवर्क को देखभाल , सामान्यतया एक उच्च कोपे वा सिक्युरन्स दरको साथ। त्यहाँ सामान्यतया प्रदायक तहहरू हुन्छन्, जहाँ टियर १ तपाईंको इन-नेटवर्क प्रदायक हुन्छ, टियर २ कम रकममा भुक्तानी गरिन्छ (र उच्च उपभोक्ता लागतको साथ), र टियर the न्यूनतम दरमा भुक्तान गरिन्छ (र उच्चतम उपभोक्ता लागतहरूको साथ)।
के म flonase र claritin सँगै लिनु पर्छ?
HMOs को जेब लागत कम छ
जब तपाईको स्वास्थ्य बीमाको समग्र लागत निर्धारण गर्नुहुन्छ, तपाईले जेबको खर्चहरू समावेश गर्नु पर्छ। यसमा प्रीमियम, कटौती योग्यहरू, सिक्युरन्स, र प्रतिलिपिहरू समावेश छन्।
TO प्रिमियम एक सेट रकम हो जुन तपाईले प्रत्येक महिना स्वास्थ्य बीमा गर्न भुक्तान गर्नुहुन्छ यदि तपाइँ त्यो महिना प्रयोग गर्नुहुन्छ भने। कम प्रीमियम योजनाहरू सामान्यतया उच्च कटौती योग्य हुन्छन् र यसको विपरित हुन्छन्। यदि तपाईको रोजगारदाता मार्फत स्वास्थ्य बीमा छ भने, यो रकम तपाईको पेचेकबाट घटाइन्छ र बीमा प्रदायकलाई भुक्तान गरिन्छ।
HMOs का पीपीओ भन्दा कम प्रीमियम हुन्छ तर भिन्नता महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ।
के तपाइँ योजना बी २ हप्ता पछि लिन सक्नुहुन्छ
वार्षिक कटौती बिमा कम्पनीले दावीहरू भुक्तान गर्नु अघि तपाईले कभर्डमा खर्च गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा खर्चमा खर्च गर्नुपर्ने कति हुन्छ। तपाइँको योजनाको मेडिकल भाग र प्रिस्क्रिप्शन भागको लागि छुट्टै कटौतीयोग्य हुन सक्छ। कटौतीयोग्य योजनाको एक हिस्सामा हुन सक्छ - जस्तै अस्पतालमा भर्ना वा प्रिस्क्रिप्शन - जुन उनीहरूले कुनै पनि दावी भुक्तान गर्नु अघि सन्तुष्ट हुनुपर्दछ।
HMO हरूको पीपीओ सहित अन्य प्रकारका योजनाहरू भन्दा कम कटौतीयोग्य हुन्छन्। केहि HMOs मा कुनै कटौती छैन।
Coins বীমা चिकित्सा देखभाल लागतहरूको एक प्रतिशत हो जुन तपाईं आफ्नो कटौती योग्य पूरा गरे पछि भुक्तानको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंसँग २०% सिक्युरन्स छ र १००० डलरको लागि डाक्टरको बिल प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं २०० डलरको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, र बीमा कम्पनीले बाँकी तिर्नेछ।
HMO हरूसँग प्रायः सिक्काइन्स हुँदैन।
एक copyayment, वा copyay , सेटको पैसा हो तपाईंले भुक्तानी गर्नुहुन्छ जब तपाईं डाक्टरलाई भेट्नुहुन्छ वा प्रिस्क्रिप्शन पाउनुहुन्छ; यो प्राय स्वास्थ्य सेवामा आधारित हुन्छ। उदाहरण को लागी, जब तपाइँको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक भ्रमण, तपाइँको copyay $ 20 हुन सक्छ; एक विशेषज्ञ को लागी $ 40; वा आपतकालीन कोठाको भ्रमणको लागि $ २ .०। प्रिस्क्रिप्शन कापीहरू सामान्यतया जेनेरिक र ब्रान्ड नाम औषधिहरूमा आधारित हुन्छन्।
HMOs लाई सामान्यतया गैर-रोकथामको हेरचाहको लागि प्रतिलिपिहरू आवश्यक गर्दछ र PPO हरू धेरै जसो सेवाहरूको लागि प्रतिलिपिहरू चाहिन्छ। नोट: कापीहरू वार्षिक कटौतीयोग्यमा लागू हुँदैनन्।
थप रूपमा, तपाईं योजना को बारे मा सचेत हुनुपर्छ अधिकतम बाहिरको जेब । यदि तपाईं यो रकम एक बर्षमा पुग्नुभयो भने, बीमा कम्पनीले तपाईंको कभर गरिएको सेवाहरूलाई त्यस क्यालेन्डर बर्षको बाँकीको लागि १०० %मा भुक्तान गर्दछ।
सबै बजार योजनाहरु को जेब सीमा बाहिर छ। २०२० को लागि , व्यक्तिको लागि pocket ,,१50० र परिवारहरूको लागि, १,,3०० छ।
रिक्याप: HMO बनाम पीपीओ
लागत प्रिमियमहरू विभिन्न कारकहरूमा आधारित हुन्छन्, जस्तै तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईंको उमेर, र तपाईंसँग पारिवारिक योजना छ कि छैन। सामान्यतया, HMO प्रीमियमहरू अन्य योजनाहरू भन्दा कम हुन्छन् (जस्तै पीपीओ) जसले तपाईंलाई अधिक लचिलोपन दिन्छ। थप रूपमा, तपाईले कटौतीयोग्यहरू, प्रतिलिपिहरू, र HMOs को साथ प्रिस्क्रिप्सनहरूको लागि कम तिर्न सक्नुहुन्छ। पीपीओ प्रीमियम HMOs भन्दा बढी छन्। तपाईं पनि सामान्यतया कटौती योग्यहरू र कपिहरू जस्ता बाहिरको जेब लागतका लागि अधिक तिर्नुहुन्छ।
नेटवर्क लागत बचतको लागि तपाइँ नेटवर्क प्रदायक भित्र रहनु पर्छ। तपाईं नेटवर्क को बाहिर जाने को लचिलोपन छ र अझै पनि केहि स्वास्थ्य सेवा कवर प्राप्त।
रेफरलहरू तपाईलाई कुनै पनि डाक्टरको बारेमा हेर्नका लागि रेफरल चाहिन्छ जो तपाईको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक होइन। तपाईलाई अन्य डाक्टरहरू / विशेषज्ञहरू हेर्नका लागि सन्दर्भहरूको आवश्यक पर्दैन।
र राम्रो भन्दा PPO HMO?
पीपीओमा लचिलोपनको आधारमा, धेरै मानिसहरूले यस प्रकारको योजना छनौट गर्छन्। PP Fort प्रतिशत कर्मचारीहरू पीपीओमा भर्ना भए, र १%% एचएमओमा भर्ना भए, २०१ Emplo रोजगारदाता स्वास्थ्य सर्वेक्षण । तर उत्तम प्रश्न यो हो, मेरो किसिमको योजना मेरो लागि उत्तम हो? दुबै पीपीओ र एचएमओ का फाइदा र हानिहरू छन्। तपाईको लागि सब भन्दा उत्तम एक तपाई र तपाईको परिवारको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ।
सामान्यतया, एक एचएमओले यसको मतलब गर्न सक्दछ यदि कम खर्चहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् र तपाईंले आफ्नो हेरचाह प्रबन्धन गर्न पीसीपी प्रयोग गर्न आपत्ति गर्नुहुन्न। जे होस्, तपाईंले योजनाको नेटवर्क सेवाहरू पहिले समीक्षा गर्नुपर्नेछ, किनकि केहि पर्याप्त सीमित हुन सक्छ। एक पीपीओ राम्रो हुन सक्छ यदि तपाईंसँग पहिले नै डाक्टर वा मेडिकल टीम छ जुन तपाईं राख्न चाहनुहुन्छ तर तपाईंको योजना नेटवर्कमा पर्दैन।
HMO योजना विचार गर्दा प्रश्न सोध्नु समावेश:
मेरो डाक्टरहरु HMO नेटवर्क मा छन्? यदि होईन भने के म प्रदायकहरू परिवर्तन गर्न तयार छु?
मासिक प्रीमियमको लागत के हो?
कपे लागतहरू के हुन्?
म र मेरो परिवार कती पटक डाक्टरमा जान्छु? एक विशिष्ट वर्ष मा, मेरो खर्च के हुनेछ?
के मेरो परिवारमा कसैको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था छ वा विस्तृत मेडिकल हेरचाह आवश्यक छ?
के म मेरो पीसीपी बाहेक एक चिकित्सा प्रदायक देख्दा रेफरलहरू लिन इच्छुक छु?
एक पीपीओ योजना विचार गर्दा प्रश्न सोध्नु समावेश:
मेरो डाक्टर योजना को नेटवर्क मा छन्? यदि होईन भने के म ज्यादा सिक्सेन्स भुक्तान गर्न तयार छु?
के त्यहाँ नेटवर्क को देखभाल को लागी घटाउन योग्य छ?
सिक्केन्स रेटको आधारमा एक सामान्य डाक्टरको भ्रमण शुल्क के हुन्छ?
के म मेरो वार्षिक जेब खर्चको अनुमान गर्न सक्छु?
के मेरो परिवारमा के कोही यस्तो छ जसको मेडिकल अवस्था राम्रो छ टियर १ बाहिर बाहिर मेडिकल प्रदायकहरु द्वारा सेवा प्रदान गरिएको वा हामी देख्न सक्दैनौं कि हामी एचएमओमा भर्ना भएको छ कि छैन?
के महँगो छ: एचएमओ बनाम पीपीओ?
सामान्यतया, HMOs का पीपीओ भन्दा कम मासिक प्रीमियम हुन्छ, तर भिन्नता सधैं महत्त्वपूर्ण हुँदैन। निम्न तालिकाले सन् २०१ in मा नियोक्ताले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्य बीमाको लागि औसत मासिक र वार्षिक प्रीमियमको तुलना प्रदान गर्दछ २०१is को लागि कैसर स्थायी रोजगारदाता स्वास्थ्य सेवा सर्वेक्षण ।
मासिक प्रीमियम (एकल)3603 40 4040०
मासिक प्रीमियम (परिवार)7१,25२। 80 १80०7
वार्षिक प्रीमियम (एकल) , 7,238 । ,,675।
वार्षिक प्रीमियम (परिवार) $ २०,69 , २१,6833
चार्ट राष्ट्रव्यापी औसतमा आधारित छ र तपाईंको रोजगारदाताले योगदान पुर्‍याउँदैन। तपाईंको वास्तविक पेरोल कटौती प्रत्येक प्रकारको योजनाको लागि फरक फरक हुन सक्छ। तपाईको मानव संसाधन विभागले प्रदान गरिएको योजना र कम्पनी योगदानको आधारमा तथ्या with्कहरू प्रदान गर्न सक्छ।
दुबै मेडिकेयर र धेरै जसो बीमा कम्पनीहरूले दुबै एचएमओ र पीपीओ प्रस्ताव गर्छन्। यदि तपाइँ एक गैर-परम्परागत चिकित्सा प्रदायक देख्नुहुन्छ भने, योजनाले यी सेवाहरूलाई कभर गर्छ कि भनेर जाँच गर्नुहोस्। गैर परम्परागत चिकित्सा प्रदायकहरु chiropractors, एक्यूपंक्चुरिस्ट, रिफ्लेक्सोलॉजिष्ट, र मसाज थेरापिस्ट सामिल छन्। बहिष्करण ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् र एक विशिष्ट वर्ष को लागी स्वास्थ्य सेवा लागतहरु गणना गर्नुहोस् जुन तपाइँको लागि सबैभन्दा उत्तम हो निर्धारण गर्न मद्दत गर्न।
भर्ना गर्न तयार हुनुहुन्छ?
यदि तपाईंसँग आफ्नो नियोक्ता मार्फत बीमा छैन भने, तपाईं सुरु गर्न चाहनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा र तपाईको क्षेत्रमा के विकल्पहरू उपलब्ध छन् हेर्नुहोस्, संस्थापक म्याट वुडले बताउँछन् क्रेडिटinformative.com । त्यहाँ, तपाई HMOs, PPOs, EPOs [विशेष प्रदायक संगठनहरू], र POS [सेवाको बिन्दु] योजना सहित विकल्पहरूको तुलना गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले प्रत्येक योजनाको लागि लाभहरूको सारांश समीक्षा गर्नुपर्छ र तपाईंको र तपाईंको परिवारको मेडिकल आवश्यकताहरूको विरुद्ध क्रस-सन्दर्भ। नेटवर्क भएका व्यक्तिहरूको लागि, तपाईं प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको प्राथमिक डाक्टर सूचीमा छ र, यदि होईन भने, त्यो योजना हटाउनुहोस् यदि तपाईं डाक्टरहरू परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न।
पर्दैन तपाईले कुन योजनाको प्रकार छान्नु हुन्छ, प्रिस्क्रिप्शनको लागि भुक्तान गर्नु अघि सिंगलकेयरमा स्थानीय मूल्य र कुपनको लागि जाँच गर्नुहोस्। जब तपाईं एकलकेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंको औषधीहरू हुन सक्छ तपाईं बीमा संग तिर्न भन्दा कम ।
म कती xanax सुत्न सक्छु
तपाईं mucinexdलिँदा रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ